Asetenam Nsɛm: Kristofo Ntetee Pa a Minyae Aboa Me Ama Mayɛ Frɔmfrɔm | Woodworth Mills
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | February 2019
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Kristofo Ntetee Pa a Minyae Aboa Me Ama Mayɛ Frɔmfrɔm
Woodworth Mills Anom Asɛm
ANADWO dasum bi, na yegyina Niger Asubɔnten kɛse no ho. Ná asubɔnten no da yɛn anim tɛtrɛɛ; na ano yɛ den, na na ne tɛtrɛtɛ bɛyɛ kwansin baako (kilomita 1.6). Saa bere no, na Nigeria Ɔmanko no rekɔ so denneennen. Enti sɛ yɛyɛ sɛ yebetwa Niger Asubɔnten no a, na yɛde yɛn nkwa reto asiane mu. Nanso, na ɛsɛ sɛ yetwa, na yɛyɛɛ saa mpɛn pii. Ɛyɛɛ dɛn na mebaa saa tebea yi mu? Ma menka nea ɛkɔɔ so ansa na wɔrewo me nkyerɛ wo.
Me papa John Mills bɔɔ asu wɔ New York City afe 1913. Saa bere no, na wadi mfe 25. Onua Russell na ɔmaa asubɔ kasa no. Ɛno akyi no, ankyɛ na Paapa kɔɔ Trinidad. Ɛhɔ na ɔwaree Constance Farmer; na ɔyɛ Bible Suani a ɔyɛ nsi. Ná Paapa boa n’adamfo William R. Brown ma oyi “Photo-Drama of Creation.” Wɔyɛɛ saa kosii sɛ wɔmaa William R. Brown ne ne yere kɔsomee wɔ Afrika Atɔe fam afe 1923. Paapa ne Maame kɔɔ so yɛɛ wɔn som adwuma wɔ Trinidad. Ná wɔn mmienu nyinaa wɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro.
NÁ YƐN AWOFO DƆ YƐN
M’awofo woo mma nkron. Wɔde wɔn ba a odi kan no too Rutherford. Saa bere no, na Onua Rutherford na ɔyɛ Watch Tower Bible and Tract Society no titenani. Bere a wɔwoo me December 30, 1922 no, wɔde me too Clayton J. Woodworth a na ɔyɛ The Golden Age (seesei wɔfrɛ no Nyan!) no samufo. Yɛn awofo hwɛɛ yɛn mu biara ma owiee mfitiase sukuu, nanso nea wosii so dua pa ara ne botae a na yɛde besisi yɛn ani so wɔ Yehowa som mu. Ná Maame wɔ akyɛde soronko; ná otumi kyerɛkyerɛ Kyerɛwnsɛm no mu ma ɛka koma. Ná Paapa taa ka Bible mu nsɛm kyerɛ yɛn; ɔreyɛ saa a, na ɔtoto ne nsa ne ne nan dannan ne ho ma asɛm no yɛ anika.
Adwuma a wɔyɛe no sow aba pa. Wɔn mmabarima nnum no mu mmiɛnsa kɔɔ Gilead Sukuu. Yɛn nuanom mmea no mu mmiɛnsa yɛɛ akwampae adwuma mfe pii wɔ Trinidad ne Tobago. Yɛn awofo nam wɔn nkyerɛkyerɛ ne wɔn nhwɛso pa so boa maa yɛn ase timii wɔ “Yehowa fie.” Sɛnea wɔhyɛɛ yɛn nkuran no boaa yɛn ma yɛtenaa yɛn “Nyankopɔn fie adiwo,” na yɛyɛɛ frɔmfrɔm.—Dw. 92:13.
Yɛn fie na na yehyiam kɔ asɛnka. Ná akwampaefo no hyia wɔ hɔ, na na wɔtaa bɔ Onua George Young ho nkɔmmɔ. Onua Young yɛ ɔsɛmpatrɛwfo a ofi Canada a na waba Trinidad. Ná m’awofo de anigye ka Onua ne Onuawa Brown a bere bi na wɔne wɔn yɛ asɛnka adwuma no ho asɛm. Nanso, saa bere no de, na Onua ne Onuawa Brown resom wɔ Afrika Atɔe fam. Weinom nyinaa na ɛkaa me koma ma mifii asɛnka adwuma ase bere a na madi mfe du no.
SƐNEA YEFII ASƐNKA ADWUMA NO ASE
Saa bere no, na yɛn nsɛmma nhoma no mu nsɛm ano yɛ hyew. Ná ɛkasa tia atoro som, aguadifo a wɔpɛ mfaso bɔne, ne amanyɔsɛm mu wontwiwontwi. Wei maa asɔfo no piapiaa nea na ɔreyɛ amrado no adwuma wɔ Trinidad no ma ɔbaraa Yehowa Adansefo nhoma nyinaa wɔ afe 1936 mu. Yɛde nhoma no nyinaa siei, nanso yɛkɔɔ so de yɛɛ asɛnka adwuma kosii sɛ ne nyinaa sae. Ná yɛde nsaano krataa ne nsɛm a wɔakyerɛkyerɛw agu nkrataa so fa mmɔnten so; ɛtɔ da a na yɛtena sakre so na ɛyɛ saa. Ná anuanom bi a wofi kurow bi a ɛde Tunapuna de kar a akasam si so ba, na na yɛne wɔn kɔ Trinidad nkuraase a ɛwɔ akyirikyiri kɔka asɛmpa no. Ná ɛyɛ anigye pa ara! Saa ɔsom adwuma a na yɛyɛ no na ɛhyɛɛ me nkuran ma mebɔɔ asu bere a na madi mfe 16.
Tunapuna asɛnka kuw a na wɔde kar a akasam si so kɔ asɛnka
Ntetee pa a minya fii m’abusua mu ne ɔsom adwuma a meyɛɛ no me mmofraase no na ɛma minyaa ɔpɛ sɛ mɛyɛ ɔsɛmpatrɛwfo. Afe 1944 no, mekɔkaa Onua Edmund W. Cummings ho wɔ Aruba. Saa bere no nyinaa na ɛwɔ me komam sɛ mɛyɛ ɔsɛmpatrɛwfo. Nkaedi a yɛyɛɛ no afe 1945 no, yɛn ani gyei pa ara sɛ yenyaa nnipa du ma wɔbaa ase. Afe a edi hɔ no, yɛtew asafo a edi kan wɔ supɔw no so.
Mewaree Oris no, ɛmaa m’asetena yɛɛ frɔmfrɔm pa ara
Ɛno akyi bere tiaa bi no, midii Oris Williams a na me ne no yɛ adwuma no adanse wɔ bɔnnɔ so. Oris ne me gyee akyinnye denneennen; nea enti a na ɔreyɛ saa ne sɛ, na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nea wɔde akyerɛkyerɛ no no yɛ nokware. Nanso, bere a osuaa Bible no, obehuu nokwasɛm a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu ankasa, na ɔbɔɔ asu January 5, 1947. Bere bi akyi no, yɛn mu biara ani begyee ne yɔnko ho, na yɛwaree. Oris fii akwampae adwuma ase November 1950. Mewaree Oris no, ɛmaa m’asetena yɛɛ frɔmfrɔm pa ara.
ƆSOM ADWUMA A ƐYƐ ANIGYE A YƐYƐE WƆ NIGERIA
Afe 1955 no, wɔtoo nsa frɛɛ yɛn sɛ yɛmmra Gilead Sukuu. Bere a yɛresiesie yɛn ho akɔ no, me ne Oris gyaee adwuma a na yɛyɛ no, na yɛtɔn yɛn fie ne agyapade foforo a na yɛwɔ, na yefii Aruba. Yewiee Gilead adesuakuw a ɛto so 27 July 29, 1956, na wɔde yɛn kɔɔ Nigeria.
Yɛne Nigeria Betel abusua wɔ Lagos, 1957
Sɛ Oris hwɛ n’akyi a, nea ɔka ne sɛ: “Sɛ obi reyɛ asɛmpatrɛw adwuma a, ɛtɔ da a, nneɛma kɔ yiye, na ɛtɔ da nso a, nneɛma nkɔ yiye. Nanso, ne nyinaa mu no, Yehowa honhom betumi aboa onii no ama wagyina. Ná me kunu pɛ sɛ ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo, nanso me de, na enni me koma mu koraa. Ná mepɛ sɛ meware wo mma na metete wɔn. Nanso, bere a mibehui sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ntɛm de nsi ne ahokeka yɛ asɛmpaka adwuma no, mesesaa m’adwene. Eduu bere a yewiee Gilead no, na masi m’adwene pi sɛ mɛyɛ asɛnka adwuma no sɛ ɔsɛmpatrɛwfo. Bere a yɛreforo po so hyɛn a wɔfrɛ no Queen Mary no, Worth Thornton a na ɔyɛ adwuma wɔ Onua Knorr ɔfese no yɛɛ yɛn ‘Baabae!’ Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛbɛyɛ adwuma wɔ Betel. Miguu ahome kaa sɛ: ‘Oo, asɛm bɛn ni?’ Nanso, ankyɛ koraa na misuaa sɛnea mɛtena Betel, na m’ani begyee ɛhɔ asetena ho. Wɔmaa me dwumadi ahorow wɔ hɔ. Adwuma a m’ani gyee ho pa ara ne adwuma a wɔma mekɔyɛɛ wɔ baabi a wogye ahɔho no. Mepɛ nnipa, na saa adwuma yi ma mihyiaa anuanom a wɔyɛ Nigeriafo. Wɔn mu pii bɛba hɔ no, na mfutuma abɔ wɔn, na wɔabrɛ, na na sukɔm ne ɔkɔm de wɔn. Ná m’ani gye pa ara sɛ mɛboa wɔn ama wɔanya biribi adwudwo wɔn bo na wɔanya awerɛkyekye. Weinom nyinaa yɛ ɔsom kronn a yɛde ma Yehowa, na ɛno maa me koma tɔɔ me yam, na m’ani gyei.” Nokwasɛm ne sɛ, adwuma biara a wɔde maa yɛn no ma yɛyɛɛ frɔmfrɔm.
Bere bi a yɛn abusua no hyiaa mu wɔ Trinidad afe 1961 no, Onua Brown kaa osuahu a ɛyɛ anigye a onyae wɔ Afrika no bi kyerɛɛ yɛn. Afei, me nso mekaa nkɔso a yɛrenya wɔ ɔsom adwuma no mu wɔ Nigeria no ho asɛm. Onua Brown fii ɔdɔ mu de ne nsa too me kɔn mu, na ɔka kyerɛɛ Paapa sɛ: “Johnny, wonkɔɔ Afrika da, nanso Woodworth akɔ hɔ!” Paapa nso kaa sɛ: “Worth, yere wo ho! Yere wo ho!” Ná mepɛ sɛ meyɛ me som adwuma yiye. Enti, nkuranhyɛ a saa anuanom a wɔde mfe pii asom Yehowa de maa me no maa mehyɛɛ mu den.
William “Bible” Brown ne ne yere Antonia hyɛɛ yɛn nkuran pa ara
Afe 1962 no, minyaa hokwan kɔɔ Gilead adesuakuw a ɛto so 37 kogyee ntetee foforo; yɛde abosome du na esuaa ade. Onua Wilfred Gooch na saa bere no na ɔyɛ Nigeria baa dwumadibea sohwɛfo. Ɔkɔɔ Gilead adesuakuw a ɛto so 38, na wɔde no kɔɔ England. Ɛbaa saa no, wɔma mebɛyɛɛ Nigeria baa dwumadibea sohwɛfo. Misuasuaa Onua Brown, enti na mitutu akwan pii. Wei ma mihuu anuanom a wɔwɔ Nigeria a wɔda me koma so no yiye. Ɛwom, nneɛma a nkurɔfo a wɔwɔ aman a wodi yiye so wɔ no, na saa anuanom no nni bi de, nanso na wɔwɔ anigye ne akomatɔyam. Wei ma ɛda adi sɛ, ɛnyɛ sika anaa ahonyade a obi wɔ ɛnna ɛma ne koma tɔ ne yam. Wohwɛ tebea a na wɔwom a, na ɛyɛ nwonwa sɛ wotumi siesie wɔn ho kama ba adesua. Ná wɔn mu pii foro trotro ne bolekajas * anaa nnua kar na ɛba nhyiam. Mpɛn pii no, wubehu nsɛm a ɛyɛ anika a wɔakyerɛkyerɛw agu saa bɔs no ho. Emu baako ne: “Nsu koko na ɛdan bɛyɛ ɛpo kɛse.”
Saa asɛm no yɛ nokware pa ara! Kakra biara a obiara tumi yɛ no, ɛboa; yɛn nso yɛyɛɛ yɛn fam de. Afe 1974 no, Nigeria bɛyɛɛ ɔman a ɛto so mmienu a enyaa adawurubɔfo 100,000; United States ne ɔman a edi kan nyaa adawurubɔfo 100,000. Ná adwuma no anya nkɔso ankasa!
Bere a Nigeria Ɔmanko a ɛkɔɔ so wɔ afe 1967 kosi afe 1970 gu so nyinaa no, na yɛrenya saa nkɔso yi. Abosome pii twaam a na baa dwumadibea no nte yɛn nuanom a wɔwɔ Biafra a ɛwɔ Niger Asubɔnten no agya no nka. Ná ɛsɛ sɛ yɛfa ɔkwan biara so de honhom fam aduan kɔma wɔn. Sɛnea mekaa no mfiase no, yɛbɔɔ mpae de yɛn ho too Yehowa so, na yetwaa asubɔnten no mpɛn pii.
Mekae sɛnea na yɛde yɛn nkwa to asiane mu twa Niger Asubɔnten no pa ara. Ná asraafo a wɔtotow atuo basabasa no betumi akum yɛn. Saa ara na na yare ne asiane afoforo nso betumi akum yɛn. Sɛ wutumi twa Nigeria aban asraafo a wosusuw sɛ onipa biara yɛ onipa bɔne no ho mpo a, nea na ɛyɛ hu pa ara ne sɛ wobɛfa Biafrafo a na wɔaka wɔn ahyɛ mu no mu. Da bi, metenaa korow mu wɔ Asaba twaa Niger Asubɔnten a ano yɛ den no anadwo kɔɔ Onitsha kɔhyɛɛ asafo mu mpanyimfo nkuran wɔ Enugu. Yɛsan twaa kwan kɔhyɛɛ mpanyimfo a wɔwɔ Aba no den. Ná wɔahyɛ mmara wɔ hɔ sɛ edu anadwo a, mma obiara nsɔ kanea. Yɛwɔ Port Harcourt no, aban asraafo no tumi sian Biafra asraafo a na wɔwɛn wɔ kurotia no ho baa kurow no mu. Enti yɛyɛɛ ntɛm bɔɔ mpae de nhyiam no baa awiei.
Saa nhyiam ahorow no ma yetumi boaa yɛn nuanom a wɔda yɛn koma so no ma wonyaa awerɛhyem sɛ Yehowa dɔ wɔn, na ɔbɛhwɛ wɔn. Yɛsan nso de afotu a na wohia saa bere no pa ara maa wɔn sɛ, ɛnsɛ sɛ wogyina ɔfã biara akyi, na mmom ɛsɛ sɛ wɔma baakoyɛ tena wɔn mu. Anuanom a wɔwɔ Nigeria no tumi faa ɔko a na ɛyɛ hu no mu a wɔannyina ɔfã biara akyi. Ɛmfa ho sɛ na ɔtan wɔ mmusua a ɛwɔ hɔ ntam no, wɔdaa no adi sɛ wɔwɔ ɔdɔ, na wɔyɛ Kristofo a baakoyɛ wɔ wɔn mu. Ɛyɛ hokwan kɛse a minyae sɛ sɔhwɛ bere kɛse a ɛte saa mu no, na meka wɔn ho!
Afe 1969 no, wɔyɛɛ “Asase so Asomdwoe” Amanaman Ntam Nhyiam wɔ Yankee Stadium, New York. Onua Milton G. Henschel na na ɔyɛ nhyiam no guamtenani. Me na na meyɛ ne boafo, na misuaa nneɛma pii fii ne hɔ. Wei baa bere pa mu, efisɛ afe 1970 no, yɛyɛɛ “Nnipa a Wɔsɔ N’ani” Amanaman Ntam Nhyiam wɔ Lagos, Nigeria. Ɔmanko no akyi pɛɛ na yɛyɛɛ saa nhyiam yi, enti yɛbɛka pa ara sɛ Yehowa na ɔboaa yɛn ma yetumi yɛe. Yɛyɛɛ nhyiam no wɔ kasa 17 mu; ná wɔnyɛɛ bi saa da. Nnipa 121,128 na wɔbaa ase. Onua Knorr ne Onua Henschel ne ahɔho a wɔhanee wimhyɛn fii United States ne England baa nhyiam no, asubɔ da no, wohui sɛ wɔbɔɔ nnipa pii pa ara asu. Efi Pentekoste besi saa bere no, na Kristofo a wɔn dodow te saa mmɔɔ asu saa da; na wɔn dodow yɛ 3,775! Metumi aka sɛ, wɔ m’asetena nyinaa mu no, saa nhyiam no a meboa ma wɔyɛe no ne bere a na minni adagyew koraa. Adawurubɔfo dodow a wɔbaa asafo no mu no, merenka sɛ na wɔdɔɔso, na mmom mɛka sɛ na wɔdɔɔso pa ara!
Nnipa 121,128 na wɔbaa “Nnipa a Wɔsɔ N’ani” Amanaman Ntam Nhyiam no bi. Kasa ahorow 17 na wɔkae wɔ nhyiam no ase, na Ibo ka ho
Bɛboro mfe 30 a mesomee wɔ Nigeria no, m’ani gyei sɛ ɛtɔ da a, na mede bere tiaa bi yɛ ɔmansin sohwɛfo adwuma ne dantaban sohwɛfo adwuma wɔ Afrika Atɔe fam. Asɛmpatrɛwfo no ani sɔe sɛ mekɔsraa wɔn mu biara hyɛɛ wɔn nkuran! Ɛyɛ me anigye pa ara sɛ minyaa hokwan maa wɔn awerɛhyem sɛ asafo no mmuu n’ani nguu wɔn so! Saa adwuma yi ma mihui sɛ, sɛ woma afoforo hu sɛ wudwen wɔn ho a, ɛma wɔyɛ frɔmfrɔm na ɛhyɛ wɔn den. Afei nso, ɛma baakoyɛ tena Yehowa ahyehyɛde no mu.
Ɔhaw ne yare a ɔko no de bae no, ɛyɛ Yehowa mmoa so nkutoo na yetumi gyinaa ano. Yehui sɛ Yehowa reboa yɛn bere nyinaa. Oris kaa sɛ:
“Yɛn mmienu nyinaa nyaa atiridiinini mpɛn pii. Bere bi de, ade tɔɔ Worth so ma yɛde no kɔɔ ayaresabea wɔ Lagos. Wɔka kyerɛɛ me sɛ anhwɛ a obewu, nanso anigyesɛm ne sɛ, wanwu! Bere a n’ani so tetew no no, ɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛm kyerɛɛ ɔyarehwɛfo a na ɔrehwɛ no no. Akyiri yi, me ne Worth kɔsraa ɔyarehwɛfo no sɛ yɛrekɔboa no ama wate Bible no ase yiye. Ná ɔyarehwɛfo no din de Owura Nwambiwe. Ogyee nokware no, na akyiri yi, ɔbɛyɛɛ asafo mu panyin wɔ Aba. Me nso mitumi boaa nnipa pii ma wɔbɛsom Yehowa; nkramofo a na wɔmfa wɔn som nni agorɔ mpo ka ho. Afei Nigeriafo a yehuu wɔn yiye na yɛdɔɔ wɔn no nso maa yɛn ani gyei pa ara. Yɛn ani gyee wɔn amammerɛ, wɔn amanne, ne wɔn kasa ho.”
Ade foforo a yesuae ni: Yehui sɛ, sɛ yebetumi ayɛ frɔmfrɔm bere a yɛresom wɔ ɔman foforo so a, na ɛsɛ sɛ yɛdɔ yɛn nuanom ɛmfa ho sɛ ɛsono wɔn amammerɛ.
Bere a yɛsomee wɔ Nigeria Betel akyi no, afe 1987 no, wɔmaa yɛn dwumadi foforo sɛ yɛnkɔyɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ supɔw bi a ɛyɛ fɛ a ne din de St. Lucia wɔ Caribbean. Ná ɛhɔ adwuma no yɛ anigye pa ara, nanso yehyiaa nsɛnnennen foforo wɔ hɔ. Afrika de, na ɔhaw a ɛwɔ hɔ ne sɛ, na ɔbarima baako tumi ware mmea pii. Nanso, St. Lucia de, na ɔbarima ne ɔbea tena sɛ awarefo bere a wɔnwaree. Onyankopɔn Asɛm a tumi wom no kaa yɛn Bible asuafo bebree koma ma wɔyɛɛ nsakrae.
Mfe 68 a yɛde waree no nyinaa, na medɔ Oris pa ara
Bere a yɛrenyin na yɛn ahoɔden so retew no, Akwankyerɛ Kuw no yii wɔn yam de yɛn kɔɔ wiase nyinaa adwumayɛbea ti wɔ Brooklyn, New York, U.S.A. afe 2005. Da biara da, meda Yehowa ase sɛ ɔma minyaa Oris sɛ me yere. Owu a ɔyɛ yɛn tamfo no faa no afe 2015, na ɛyaw a ne wu no ama midi de, mintumi nka. Ná ɔyɛ ɔhokafo pa, na ɔwɔ ɔdɔ, na na ɔyɛ me yere a medɔ no Mfe 68 a yɛde waree no nyinaa, na medɔ Oris pa ara. Yehui sɛ nea ɛma yɛn ani gye wɔ aware mu ne asafo no mu nyinaa ne sɛ, yebebu tiyɛ, yebeyi yɛn yam de bɔne akyɛ, yɛabrɛ yɛn ho ase bere nyinaa, na yɛada honhom aba no adi.
Sɛ yɛn abam bu anaa nneɛma nkɔ yiye a, na yɛsrɛ Yehowa sɛ onhyira adwuma a yɛreyɛ no so. Yehui sɛ bere biara a yɛbɛyɛ nsakrae no, na nneɛma yɛ yiye, na daakye de, ɛbɛkyɛn!—Yes. 60:17; 2 Kor. 13:11.
Yehowa ahyira adwuma a m’awofo ne afoforo yɛe wɔ Trinidad ne Tobago no so. Amanneɛbɔ bi a wɔde too gua nnansa yi kyerɛ sɛ, nnipa 9,892 na wɔaba nokware no mu. Aruba nso, anuanom pii yeree wɔn ho hyɛɛ asafo a na mewom no den. Ɛnnɛ, asafo 14 a ɛrenya nkɔso na ɛwɔ saa supɔw no so. Nigeria de, adawurubɔfo a wɔwɔ hɔ no dodow akɔ anim pa ara akodu 381,398. Supɔw St. Lucia nso, adawurubɔfo 783 na wɔreka Yehowa Ahenni no ho asɛm.
Seesei madi mfe 90 ne akyi. Dwom 92:14 ka wɔn a wɔadua wɔn wɔ Yehowa fie no ho asɛm sɛ: “Sɛ wofuw dwen mpo a, wɔbɛsow aba, na wɔbɛkɔ so ayɛ akɛse ne frɔmfrɔm.” M’ani sɔ dwuma a wɔde me adi wɔ Yehowa som mu no pa ara. Kristofo ntetee pa a minyae no ahyɛ me nkuran ama masom Yehowa yiye. Yehowa adɔe nti, wama ‘mayɛ frɔmfrɔm wɔ me Nyankopɔn fie adiwo.’—Dw. 92:13.
^ nky. 18 Hwɛ Nyan! a ɛbaa March 8, 1972, Borɔfo de no kr. 24-26.
Share Share Kristofo Ntetee Pa a Minyae Aboa Me Ama Mayɛ Frɔmfrɔm
w19 February kr. 26-30
Kura Wo Mũdi Mu!
Hwehwɛ Ahobrɛase Na Sɔ Yehowa Ani
Adɛn Nti Na Ɛsɛ Sɛ Yɛkyerɛ Nneɛma Ho Anisɔ?
Sɛnea Wɔdaa Ɔdɔ Ne Atɛntrenee Adi Wɔ Tete Israel
ASETENAM NSƐM Kristofo Ntetee Pa a Minyae Aboa Me Ama Mayɛ Frɔmfrɔm
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM February 2019
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM February 2019
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM February 2019
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM February 2019
Masi Me Bo Sɛ Meremma Me Nsam Ngow
Sɛnea Minyaa Ɔma Mu Anigye